3 wax aad u baahan tahay fikir inta aad ka iibsan adeeg geeyo music tufaax
Adeeg geeyo music Apple waxa loo arki karaa adeegga music jaban marka ay timaado xoqdo ee bil kasta oo ay tahay sabab u ahaa xaqiiqada ah in Apple Inc. doonayo adeega magooliyey sida ugu badan ee si fiican. Si aad u hesho sida ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegga tahay waxaa sidoo kale ku taliyey in la hubiyo in qaar dhibic waxaa lagu falanqeeyay hor iibka.
Waxaan doorato inaad adeeg geeyo music tufaax: Wax 1?
Wax 2: Spotify ama music tufaaxa?
Wax 3: Helitaanka habka free music aad u baahan tahay ogahay
Wax 1: Waxaan doorato inaad adeeg geeyo music tufaaxa?
Waxa jira dhowr wax oo hoos yimaada ay marayso iyo user ah waa in la hubiyo in qof walba oo ka mid ah taas oo aan la falanqeeyay kaliya sameeyo laakiin waa in lagu sameeyo hab daacad ah si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira. Ka dib markii qaar ka mid ah qodobbada xusid mudan in arrintan la xiriira oo ka heli user fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay:
Waa maxay adeegga music tufaaxa waxaa ka mid ah?
Waxaa ugu horeeyay oo hal dhibic ugu horreeyey. Adeegga geeyo music Apple ka mid ah raadiyaha 3 bil maxkamad, a bitrates of 256 kbps, size maktabadda ee 30MB, 25K songs labiska, gacanta ku Siri iyo garaaca 1 feature ayaa lagu soo daray arrintan la xiriira. Waxa kale oo ay taageertaa YouTube videos aan xayeysiis kasta oo wax yaabahan ugu fiican in la soo gundhig ay gudahood.
Qiimaha adeegga music tufaax
Qiimaha adeegga music Apple sidii loo soo sheegnay ka hor waa mid aad u raqiis ah marka la eego dollars in qofka macaamiisha ah u baahan yahay inuu ku qaataan iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in user wuxuu hubinayaa in in qiimaha waxaa sidoo kale marka la barbar dhigo adeegyada kale ee uu hoos hayay tixgelin. Marka ay timaado in adeega iyo qiimaha la xiriira ka dibna waa in la ogaadaa in ay amarka u bil kasta waa $ 9.99 iyo pack qoyska 6 xubin ka mid ah ayaa sidoo kale lagu soo bandhigay oo ku kacaya $14.99 bil kasta si user ah kaas oo sidoo kale waa mid aad u jaban marka loo eego kale ah adeegyada in ay ka shaqeeyaan suuqa.
1. Waxay leedahay codsiga android ah iyo sidoo taas oo ka dhigaysa hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijada tahay cross madal.
2. fannaaniin dhibtoonaya hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira oo ay uploading music in loo abuuray in la ogaaday laga yaabaa.
3. A saddex bilood raad lacag la'aan ah waxaa uu u suuragelinayaa user in ay go'aan ka gaarto waxa loo baahan yahay in la sameeyo ka dib markii ay dhammaato muddada this.
1. Adeegga geeyo Apple ma ogola user si ay u helaan buugga oo dhan ad Lugood ay taa bedelkeeda waxa ay ku siinaysaa in ay helaan 30 M heesaha oo kaliya.
2. fursadaha add taageeray ma jiraan si ay u taageeraan music iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user a raaxaysan karaa saldhigyada raadiyaha curated laakiin DJ ee.
3. taageero qalab waa mid aad u xadidan oo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in user waa ay awoodaan in ay kaliya helaan android iyo qalabka macruufka. Si ka duwan dhufto ee kale kuwaas oo siiya taageero yarada waxay.
1. Apple ayaa daahfurka a music fiican
Waa mid ka mid ah qaababka ugu fiican ee ka dhigaya adeegga geeyo Apple khayr badan Spotify, laakiin taas macnaheedu ma aha in Apple ayaa ka sarre maray Spotify dhinac kasta iyadoo ay jiraan qaar ka mid ah dhinacyada halkaasi oo Spotify dhaafa Apple marka la eego sifooyinka:
2. Playlists ka khayr on Spotify
Waxaa xaqiiqo ah oo aan la iska indho tiri karin kharash kasta oo user ka heli kartaa ugu fiican oo gobolka ka mid ah adeegyada tahay in arrintan la xiriira marka ay timaado Spotify liiska music sida ay sidoo kale iskaashi la playlists dadka kale si fudud sida rabitaan :
3. Codsiga internetka Spotify waa qatar
Waxaa mar kale xaqiiqo ah in kaliya waxaa lagu sharaxi karaa user oo aan kaliya loo isticmaali codsiga internetka laakiin waa sidoo kale jeclaan ah haddii ay tani gabal casriga ah mid laga cabsado. Waxaa lagula talinayaa in ay hubiyaan in codsiga Spotify waa in la soo bixi, waayo, desktop marka la barbar dhigo Apple taasoo u muuqataa xunxunna ay sabab u tahay Lugood,
4. Marka la barbardhigo aragtida maktabadda
Waa shaqo aad u adag tahay in ay sameeyaan. Xaqiiqda ayaa ah arrinta waa in aragtida maktabadda ee Spotify ku jiro si loo hubiyo in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay marka ay timaado fursadaha iyo dhinaca kale aragtida maktabadda Apple hubiyaa in user heli karo mudaharaadyada ugu wanaagsan oo muuqaal ah in arrintan la xiriira:
5. Artists pages
Waxay u egyihiin wanaagsan iyo aqoon u bixiyaan macluumaad ku saabsan tareenka in lagu ciyaaray taas oo macnaheedu yahay in user helo ugu fiican oo gobolka ka mid ah natiijooyinka tahay in arrintan la xiriira ka. Tirinta tirada ay weheliyaan bio artist sidoo kale waa warbixin qaar ka mid ah kaas oo uu bixiyo Spotify ee arrintan la xiriira mar kale la siiyo ku laayeen in ka badan Apple:
6. aragtida Album
Halkan waa wax kale oo ka dhigaya Apple dhaafo Spotify iyadoo album ka mid ah Apple naga fog ka khayr badan Spotify ah:
TunesGo waa Wondershare horumarinta ah in la sameeyo si loo hubiyo in gobolka adeegyada farshaxanka waxaa la siiyaa dhammaan macruufka users kuwaas oo doonaya in ay helaan lacag la'aan ah oo gobolka ka mid ah adeegyada farshaxanka ee la xiriirta free music download. Waxaa shaki la'aan waa yaab in la sameeyo by Wondershare iyo sabab la mid ah waxa la qiimeeyo sare by users ee arrintan la xiriira.
Download music geeyo si mp3 free la TunesGo
> Resource > Music > 3 Waxyaabaha aad u baahan tahay fikir inta aadan iibsan Service Apple Music Streaming